पत्रकार वीरेन्द्र साहका हत्यारालाई सर्वस्वसहित जन्म कैद
मुख्य अभियोगी पार्टीको जिम्मेवार पदमा गोकुल घोरसाइने, निजगढ, १६ जेठ/ जिल्ला अदालत बाराले पत्रकार वीरेन्द्र साहको हत्या आरोपमा ए. नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीका पूर्व कार्यकर्ता मैनेजर गिरी र रामएकबाल सहनीलाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गरेको छ। साहको हत्या आरोपमा मुद्दा परेका पाँच अभियुक्तमध्ये जिल्लाको इनर्वासिरा–९ का गिरी र खोपवा गाविसका सहनीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय भएको हो। चार वर्षदेखि विचराधीन मुद्दामा चौथो पटको सुनुवाइपछि अदालतले सोमवार दिउँसो यस्तो फैसला गरेको हो। जिल्ला अदालतमा बिहानैदेखि मुद्दामा सुनुवाइ र बहस भएको थियो। जिल्ला न्यायाधिवक्ता भुवनेश्वर पौडेलका अनुसार साहको हत्या अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका माओवादी कार्यकर्ता गिरी र सहनीविरुद्ध अदालतको २ नम्बर इजलासका न्यायाधीश बालमुकुन्द दवाडीको एकल इजलासले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गर्ने निर्णय गरेको हो। न्यायाधिवक्ता पौडेलका अनुसार फरार रहेका अन्य तीनजना अभियुक्तको हकमा मुद्दा मुल्तबी राखिएको छ। “माग दाबी अनुसार फैसला भएको छ”– न्यायधिवक्ता पौडेलले बताए। फरार र अन्यको हकमा मुद्दाको थप प्रक्रिया जारी
प्रस, जीतपुर, १६ जेठ/ होलीराज अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कूल जीतपुरद्वारा आयोजित होलीराज च्याम्पियन टुर्नामेन्ट प्रतियोगिताको फाइनल सम्पन्न भएको छ। खेल अवधिमा कुनै टिमले गोल गर्न नसकी अन्तत: पेनाल्टी किकबाट विजयी टिम छनोट भयो। पेनाल्टी किकमा राष्ट्रिय उच्च मावि बकुलियाले ३ गोल गरी शिल्ड हात पार्न सफल भएको छ भने प्रतियोगी ब्राइटर एकेडेमी सिमरा २ गोलमा सीमित रहेको प्रतियोगिताका इन्चार्ज संदिप साहले बताए। विजयी टिमलाई आयोजक होली राज अङ्ग्रेजी बोर्डिङ स्कूल जीतपुरका प्रमुख सुधीरलाल दासले एक समारोहबीच शिल्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण गरे।
म्याद थपको सार्थकता र सफल हुने उपाय
अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव आखिर संविधानसभाको म्याद थपियो। यद्यपि जेठ चौधमा शान्ति र संविधान नआउने पक्का भएर म्याद थप्नु निर्विकल्प भएपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विभिन्न बखेडा देखाएका थिए। सत्तापक्ष म्याद थप गर्न कम्मर कसेको थियो भने प्रतिपक्षले कुनै हालतमा म्याद थप नगर्ने आशय देखाएको थियो। यद्यपि सत्तापक्षले म्याद थपका लागि दुईतिहाई बहुमत जुटाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको थियो भने प्रतिपक्षले एकतिहाई विपक्षमा उभ्याउने प्रयास देखाएको थियो। प्रतिपक्षको एक तिहाईले विधेयक पारित हुन नसक्ने घुर्की देखाएको थियो। दुवैको साँढे जुधाइले मुलुकलाई विनाशतिर धकेल्नेबाहेक अर्को उपाय थिएन। यद्यपि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जे जस्तो व्यवहार देखाएपनि यथार्थमा म्याद थप नगर्ने पक्षमा न कोही थियो न हुनसक्थ्यो। किनकि म्याद थप नहुँदा मुलुकको भविष्य धरापमा परोस् वा नपरोस्, प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सभासद्हरूको जागिर र आर्थिक लाभ धरापमा अवश्य पथ्र्यो। चिल्ला गाडीको यात्रा र पाँच तारे होटेलको खाजा–नास्ता धरापमा अवश्य पथ्र्यो। विगत केही महिनादेखि म्याद थप हुन नदिने अडान राखेको प्रतिपक्षले अन्तमा म्याद थपका लागि श
ई. गोपाल श्रेष्ठ क्रिएटिभिटी भनेको ‘एप्लाइड इमेजिनेसन’ हो। कुनै समस्या आइलाग्दा हामी घोत्लिएर सोच्न बाध्य हुन्छौं। जब यो सोच सृजनशील तथा सफल हुन्छ अनि हामी भन्छौं हाम्रो क्रिएटिभिटी बढ्यो। क्रिएटिभिटी त्यसै बढ्दैन, यसको लागि अध्यनशील हुनुपर्छ साथै कुनै पनि समस्यालाई विभिन्न धरातलबाट हेर्ने अभ्यास हुनुपर्छ। एउटा धरातलबाट मात्र हेर्दा समस्याको समाधान सजिलो देखिएला। तर, यो समाधान आंशिक मात्र हुन्छ। आंशिक समाधान कहिलेकाहीं खतरनाक हुन्छ र समस्या झन् बल्झ्याइदिन्छ। पूर्ण समाधानका लागि समस्याको बहुपक्षीय रूपको अध्ययन गर्नै पर्छ। यो त्यति सजिलो काम भने होइन। दूधमा घिउ (फ्याट) छ भनी पहिलोपटक पत्ता लगाउनु क्रिएटिभिटी हो भने सूर्यको किरणमा सात रङग छ भनी पहिलोपटक पत्ता लगाउनु पनि क्रिएटिभिटी नै हो। क्रिइटिभ हुनु भनेको समस्याको जरा समात्नु हो। साधारणतया मानिसहरू सतही अध्ययनको आधारबाट सतही निर्णय लिन्छन्। यो कहिलेकाहीं घातक हुन जान्छ। जस्तो डाक्टरले बिरामीलाई राम्ररी नहेरी अथवा नजाँची तपाईंलाई क्यान्सर रोग लागेको छ भनी दियो भने बिरामीलाई कस्तो आघात पर्ला ? त्यस्तै डाक्टरले राम्ररी नजाँची त
वीरगंजमा क्षेत्रीय भलिबल प्रतीयोगिता सुरू
व्यक्तित्व विकासका लागि खेल अपरिहार्य– वाणिज्यदूत अग्रवाल आरके पटेल, वीरगंज,१६ जेठ/ क्षेत्रस्तरीय भलिबल तथा एथलेटिक्स प्रतियोगिता आजदेखि वीरगंज नारायणी रङगशालामा सुरु भयो। प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै भारतीय महावाणिज्यदूत आशुतोष अग्रवालले व्यक्तित्व विकासका लागि खेल अपरिहार्य भएको बताए। नागरिकको सर्वाङगीण विकास भएमा देश आफैं विकसित हुन्छ–महावाणिज्यदूत अग्रवलको कथन थियो। समुद्घाटन समारोहमा प्रशिक्षकलाई बल हस्तान्तरण गरी महावाणिज्यदूत अग्रवालले खेलको शुभारम्भ गरेका थिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झा विशिष्ट अतिथि रहेको उद्घाटन समारोहमा स्थानीय विकास अधिकारी विश्वराज डोटेल, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष मानदेव हजरा, सदस्य देवानन्द यादव, समाजसेवी पशुपति विक्रम शाह, तारा शम्शेर राणा, भारतीय वाणिज्य दूतावासका कन्सुलर पिडी देशपाण्डेलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। तीन दिनसम्म चल्ने भलिबल प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चलका १० जिल्लाका २४० जना छात्रछात्राले सहभागिता जनाउने आयोजक संस्था मध्यमाञ्चल खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ।
गोलचक्करमा पार्ने जुक्ति
दुई वर्ष बित्यो, एक वर्ष पनि बित्यो। अहिलेसम्म संविधानसभाले पाएको तीन वर्ष खेर गएजस्तै भएको छ। यसपटक तीन महिने म्याद थपिएको छ। हुन सक्छ तीन वर्षको अन्तरालमा थुप्रै कामहरू भए होलान्। किनकि शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूको कुरा सुन्दा त्यस्तै आशय झल्कन्थ्यो। फलानोले चाहयो भने साता दिनमा संविधान बन्छ, फलानोले सहयोग गर्‍यो भने आजै संविधान जारी गर्न सकिन्छ– आदि, इत्यादि। तसर्थ तीन महिना म्याद थपिनु ठूलो कुरो हो– यदि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने। शनिवार जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद सकियो, म्याद थप्ने–नथप्ने कुनै निर्णय हुन सकेन। भोलिपल्ट बिहान ५ बजेमात्र निर्णय भयो। र त्यसै दिनदेखि एक पक्षले ‘प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’ र प्रधानमन्त्री चाहिं ‘राष्ट्रिय सरकारको विकल्प तयार भएपछि राजीनामा दिन्छु’ भनी सत्ताको खेलमा रम्न थालेका छन्। राष्ट्रिय सरकार भनेको संविधानसभामा उपस्थित सबै दलको मिलोमतोमा सबै दल सहभागी सरकार हो। कुनै पनि दल, खासगरी तीन ठूला दलमध्ये कोही एक सरकारमा सामिल भएन भने राष्ट्रिय सरकार बन्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा कसरी बन्छ, राष्ट्रिय सरकार र कसरी बन्छ तीन महिनामा संविधान ? एक
सबैको चाहना शान्ति र संविधान
आरके पटेल, वीरगंज, १५ जेठ/ चौथो गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज वीरगंजमा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भयो। बिहान घण्टाघर चोकबाट सुरू भएको प्रभातफेरी त्रिजुद्ध उच्च मावि पुगी सभामा परिणत भएको थियो। ‘देशमा गणतन्त्रण स्थापना गर’, ‘गणतन्त्र सुदृढीकरण गर’, ‘शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर’ लगायत नाराहरू लेखिएका प्लेकार्ड बोकी निस्केको र्‍यालीमा राजनितीक दलका प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक तथा विद्यार्थी एवं पेशागत सञ्जाल, नागरिक समाजका अगुवाहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरीको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीको टुकडीले ज्ञात–अज्ञात शहीदप्रति सलामी अर्पण गरेका थिए। सो अवसरमा आयोजित समारोहमा जिल्लास्थित विभिन्न विद्यालयका बालबालिका एवं नीलहीरा समाजले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन गरेका थिए। गणतन्त्र मूल समारोह समितिका संयोजक तथा जिल्ला विकास समिति पर्साका स्थानीय विकास अधिकारी विश्वराज डोटेलको सभापतित्व एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी नागेन्द्र झाको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न समारोहमा सशस्त्र
माटो र पानी भरिएपछि कालोपत्रे नष्ट हुने क्रममा
आरके पटेल, वीरगंज, १५ जेठ/ बहुअर्वाभाटा गाविसको गर्दौलको मन्दिर नजिक वीरगंज–पोखरिया सडकमा ओछयाएको कालोपत्रे काम नलाग्ने भएको छ। सडक आसपासका बासिन्दा एवं व्यवसायीहरूले सडकको दुवैतर्फ माटो भरेपछि सडक खराब भएको हो। कालोपत्रे सडक पूरै माटोले पुरिएको छ। माटोले ढाकेको सडकबाट सवारी सञ्चालन हुँदा कालोपत्रे भत्किएर सडकमा खाल्टाखुल्टी परेको छ। चार फिटसम्मको खाल्टो परेको उक्त सडक वर्षाको वेला कुनै कच्ची सडक भन्दा कम छैन। हिलाम्य सडकमा साइकल तथा मोटरसाइकल चल्न पनि समस्य भएको यात्रुहरूको गुनासो छ। सडकछेउ नाला नहुँदा वर्षात्को पानी सडक भएर घर–पसलमा पस्न थालेपछि यसरी सडकमा माटो थुपारी पानीबाट बचाव गरिएको हो। सडक छेउ चापाकल गाडिएका छन् जसको पानी सडकमैं आउँछ। यसरी सडक जहिले पनि जलमग्न हुँदा कालोपत्रे बिग्रिरहेको छ। गाविस, जिविस तथा सडक विभागलगायत स्थानीय बासिन्दाले ढल निकासतर्फ समयमैं चासो नदिने हो भने कालोपत्रे पूरै नष्ट हुने खतरा रहेको प्रविधिकहरूले बताएका छन्।
कलैयामा दौड प्रतियोगिता
प्रस, कलैया, जेठ १५/ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल खेलकुद महासङ्घ बाराको आयोजनामा आइतवार सदरमुकाम कलैयामा दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। एक सय मिटरको दौड प्रतियोगितामा रवि पासवान प्रथम, बडे मंसुर द्वितीय र इमरान मंसुर तृतीय भए। यसैगरी दुई सय मिटरको दौड प्रतियोगितामा रामनिवास प्रथम, वसीम राजा द्वितीय र राजकिशोर पासवान तृतीय भए। त्यसैगरी चार सय मिटर दौड प्रतियोगितामा रवि पासवान प्रथम, बजेन्द्र चौधरी द्वितीय र अलि अकबर मंसुर तृतीय भए। प्रतियोगिताको उद्घाटन एक समारोहबीच नेपाल खेलकुद महासङ्घका मध्यमाञ्चल इन्चार्ज एम समिउल्लाह एवं खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष मुक्ति यादवले संयुक्त रूपमा गरे। क्यामुद्दिन मंसुरको अध्यक्षतामा सो प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो।
विद्यार्थीको शैक्षिक विकासमा अभिभावकको भूमिका
-अनन्तकुमार लाल दास मानिसको भविष्य वा चरित्र निर्माणका लागि बाल्यकाल नै उपयुक्त समय हो। यस अवस्थामा नै व्यक्तित्व निर्माणको जग राख्न जरुरी छ। यस अवस्थामा विद्यार्थीहरूको प्रवृत्तिमा लचिलोपन हुन्छ। यसर्थ अभिभावकको संस्कार उत्तम छ भने उनका छोराछोरीको संस्कार पनि उत्तम नै हुन्छ। हाम्रो धार्मिक ग्रन्थमा के भनिएको छ भने आमाबुवाका शारीरिक र मानसिक अवस्थाको गर्भस्थ सन्तानको शरीर र मनमा गहिरो प्रभाव पर्दछ। यस कारण सन्तान जन्मिने समय उसको पहिलो गुरु आमा नै हुन्छिन्। आमा उनीहरूको शारीरिक गठन वा स्वास्थ्यको लागि मात्र उत्तरदायी हुँदिनन् अपितु उसको चरित्र निर्माणको पहिलो दायित्व पनि उनैमाथि हुन्छ। आमापछि उनीहरूमाथि उसको बुवाको व्यक्तित्वको प्रभाव पर्दछ। विद्यालय पुग्नुअघि अभिभावकले उसको पालनपोषण मात्र गर्दैनन् अपितु उसलाई विभिन्न प्रकारका कुराहरूको पनि ज्ञान दिन्छन्। यस कारण घरको वातावरणको प्रभाव उनीहरूमाथि स्वाभाविक नै पर्न जान्छ। माया सँगसँगै उनीहरूलाई संयम, अनुशासन, शुद्ध उच्चारण र विशुद्ध आचार–व्यवहारको शिक्षा दिनु पनि आमबुवाको कर्तव्य हुन्छ। आमाबुवाको सीमाभन्दा बढी मायाले केटाकेटीलाई उत्
अब त चेत खुलोस् ?
मुलुकका सबैभन्दा वरिष्ठ नागरिक भनिएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले सबैभन्दा गरिष्ठ बन्न पुगेका छन्। किनकि उनको आफ्नै भूमिका अन्योलपूर्ण रहयो। दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्न कम्मर कसेका यिनले थप एक वर्षको समयमा संविधान बनाउन सकेनन् र अब के हुन्छ वा के गर्ने विषयमा पनि एउटा ठोस निर्णय दिन सकेनन्। जसले गर्दा संविधान सभासद् भनेपछि आम नेपाली जनतामा अहिले एउटा आक्रोश, क्ष्ुाब्धता र हीनताको भावना पलाएको छ। कहीं माना पकाउनका लागि मात्र संविधान नबनाएको आरोप लागिरहेको छ भने कहीं तिनको पुतला दहन गरिंदै छ। कुरा कहाँसम्म बढिसकेको छ भने सभासद्हरुमध्ये केही यस संविधानसभाले संविधान बनाउनै सक्दैन, नयाँ जनादेश लिनुपर्छ भनिरहेका छन् भने केही सभासद् जनताको आरोपबाट भुतुक्क भएर भत्ता नलिएर म्याद थपी संविधान बनाउने कुरा उठाउँदै छन्। म्याद सकिएको जेठ १४ गते राति १२ बजेसम्म देश अन्योलपूर्ण नै रहयो। तीन ठूला दलहरुबीच सहमतिमात्र भयो, प्रथम चरणमा माओवादी लडाकूसँग रहेको हतियार बुझाएर तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङगोमा पुर्‍याउने तत्पश्चात् तीन महिनामा संविधान निर्माण गर्ने सहमति बिहानसम्म टुङगो लाग्न सकेन र ५ बजेपछ
हतियार एकसाताभित्र थन्क्याउन एमाओवादी सहमत– नेका संविधानसभाको म्याद दुई चरणमा थप्न तीन दल सहमत
काठमाडौं, १४ जेठ/रासस एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो दलका नेताको सुरक्षाका निम्ति लिएका हतियार एकसाताभित्र शिविरमा रहेका हतियारसँगै कन्टेनरमा राख्न तथा दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउन सहमति जनाएको छ। सो सहमति प्रमुख तीन दललगायतका दलहरूसँगको वार्तामा एमाओवादीले जनाएको हो। संविधानसभा भवनमा आज राति सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति तथा संसदीय दलको संयुक्त अनौपचारिक बैठकमा सोबारे जानकारी दिइएको दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए। कन्टेनरमा रहेका हतियार सेना समायोजन विशेष समितिले अनुगमन तथा रेखदेख गर्ने विषयमा पनि एमाओवादी सहमत भएको नेता पौडेल र महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताए। आफ्नो दलले दुई चरणमा संविधानसभाको कार्यावधि थप्न प्रस्ताव गरेको र पहिलो चरणमा ४५ दिन गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको जानकारी पनि उनीहरूले दिए। नेताद्वयका अनुसार तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राष्ट्रिय सहमति कायम हुने अवस्थामा आफू बाधक नबन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए। संविधानसभाको म्याद थप गर्ने तथा शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेसम्बन्धी तीन दलीय सहमतिको मस्यौदा अह
नालामा विद्युत् प्रवाह हुँदा टोल आतङिकत
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/ वीरगंज–१४ स्थित फूलबारी टोलस्थित ढल निकासको नालीमा विद्युत् प्रवाह भएपछि टोलवासी आतङिकत बनेका थिए। प्राधिकरणले विद्युत् पोलबाट अर्थिङ लिनका लागि जमिनमा गाडिएको तार ढल निकासको नालीमा परेको र विद्युत् लाइनको तारबाट चुहिएर आएको करेन्ट अर्थिङको तार हुँदै नालाको पानीमा प्रवाह भएको थियो। आज बिहान अन्दाजी ६ बजेको समयमा स्थानीय बालबालिकाले नालीमा माछा मरेको देखेर टिप्न जाँदा नालाको करिब दुई फिट आसपास सडकमा करेन्टको झडका लागेको थियो। सो कुरा थाहा भएपछि तुरून्त विद्युत् प्राधिकरणको टोली घटनास्थलमा पुगेर मर्मत गरेको थियो। बितेको साता पनि विद्युतीय तारको जडान छुटेर सोहीपोलबाट आगोका लप्कासहित विद्युत् प्रवाह भएको थियो । समयमैं थाहा भएकोले अप्रिय घटना हुन भने पाएन । विद्युत् कर्मचारीले मर्मत सम्भार गरेको १५ दिन नबित्दै पुन: गडबड हुनु र अर्थिङ तारलाई पानीमा पर्ने गरी नालामा राख्नुमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको टोलवासीको भनाइ छ । मर्मत सम्भारमा खटिएका विद्युत्का प्राविधिकहरू भने उक्त लाइनबाट सेवा लिइरहेका घरहरूको वायरिङ गडबडियो भने पनि त्यसको असर पोलको मुख्य तारमा पर
दल फुट्नु लोकतन्त्रको लागि अभिशाप हो
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला अन्तत: मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल पाँचौंपटक विधिवतरूपमा फुटेको छ। जयप्रकाश गुप्ताको अध्यक्षतामा मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) नामले नयाँ दल दर्ता भएको छ। हिजोसम्म सँगै मधेस र मधेसी जनताको हितमा काँधमा काँध जोडेर हिंडेका उपेन्द्र यादव र जयप्रकाश गुप्ता आज एकले अर्कोलाई आक्षेप लगाउनमा व्यस्त छन्। मधेसी दलहरूको यो नियति देखेर मधेसका जनता वाक्क–दिक्क भइसकेका छन्। सद्भावना, तराई–मधेस दलहरू पनि चिराचिरामा विभाजित भएका छन्। यी सबै दलहरू विभाजन कुन बेला भएका छन् भने जहिले सत्तामा जाने बेला हुन्छ त्यसबेला विभाजित भएका छन्। सत्तामा पद पाएकाहरूको विरुद्धमा अर्को गुट, जसले पद पाएको छैन या मन्त्री बन्न पाएको छैन, त्यो गुटले विभिन्न तानाबाना बनाएर दललाई विभाजित गरिहाल्छ। यो तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको इतिहास पनि भएको छ र नियति पनि। मधेसी दलहरूको यो टुट र फुटको संस्कारले तराई–मधेसका जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई छियाछिया पारेको छ। दल टुट्नु–फुट्नु, गुट, उपगुट बन्नु–बनाउनु, दल विभाजन हुनु आदि इत्यादि यो हाम्रो देशको राष्ट्रिय रोग भएको छ। केही निहीत स्वार्थ भएका र जनत
दुनियाँ सानो हुँदैछ, मानिस घनिष्ट
गताङकको बाँकी...... यो त भयो राजसत्ता, विज्ञान, शिक्षा, सञ्चार आदि व्यवस्थाहरूको कुरा–व्यक्तिको दृष्टिले सोच्ने हो भने पनि हामी यसै परिणाममा पुग्छौं कि मानिस–मानिसबीच देश, जाति–धर्म, सम्प्रदाय आदिको नाममा जुन खाडल खनिएको छ, त्यो अब क्रमश: भरिंदै गइरहेको छ। मानिस मानिसको बढी नजिक आइरहेको छ। एक अर्कालाई बुझ्ने बढी सतर्कतापूर्वक प्रयास गरिंदै छ र एक ठाउँमा मच्चिएको रडाँकोलाई रुचिपूर्वक हेरिइँदैछ। दैनिक समाचार पढ्नमा–रेडियो समाचार सुन्नमा मानिसहरूको बढ्दो रुचिबाट के प्रकट हुन्छ भने व्यक्तिगत लाभ–हानिमात्रमा सीमित नरहेर अन्यान्यद्वारा अन्यत्र हुने क्रियाकलाप एवं घटनाक्रमहरूमा कसरी अभिरुचि उत्पन्न भइरहेको छ र महत्त्वपूर्ण समाचारहरूले कसरी टाढा–टाढासम्म आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्। सङकटग्रस्त मानिसको सहायताका लागि कसरी टाढाका मानिस धन–जन तथा सहायता लिएर दगुर्छन्– यसको लेखाजोखा निकै उत्साहप्रद छ। यस स्नेह–सहयोगबाट के प्रकट हुन्छ भने अब दुनियाँ धेरै सानो रहेन। लोकमानस, लोकमतका साथै लोकमङगल, लोकरञ्जन, लोकसत्ताको सामथ्र्य अधिकाधिक प्रचण्ड बन्दै गइरहेको छ। संस्था एवं सङगठनहरूको विस्ता
दर्जनौं गाविसलाई क्षति पुग्ने गरी बनाइन लागेको सीमा क्षेत्रको बाँध निर्माण कार्य रोक्का
आरके पटेल, १२ जेठ/ भारतीय ठेकेदारले नेपाल भारत सिमाना छुटयाउने सबैठवा गाविस नजिक दसगजा क्षेत्रमा गैरजिम्मेवार तरिकाले निर्माण गरिरहेको बाँधको निर्माण कार्यमा रोक लगाइएको छ। ठेकेदारले बाँधको निर्माण कार्य राति बिनासूचना एकाएक सुरु गरेको कारण सो क्षेत्र आज दिनभरि तनावपूर्ण थियो। मुख्य पिलर ४०५ र ४०६ बीच भए बग्ने सिक्टा नदीको पानी नियन्त्रणका लागि बाँध निर्माण भइरहेको हो। बाँधको कारण सो भेगका दर्जनौं गाविस डुबानमा परी हजारौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा वर्षा याममा जलमग्न हुने सबैठवाका शिवपूजन चौरसिया बताउँछन्। सीमास्थित सिक्टा नदीको पुलदेखि १५७ मिटर पर बाँध निर्माण गर्न बिहार सरकारले अनुपुर्णना कन्ट्रक्सनलाई ठेका दिएको छ। ठेकेदारका प्रतिनिधि विक्रांत कुमारले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा राति ११ बजेदेखि गोप्य तरिकाले काम सुरु गरेको सीमावर्ती नेपालका नागरिक बताउँछन्। यस बाँधको निर्माणले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रने गाउँलेहरूले बताएका छन्। राति ११ देखि ५० भन्दा बढी टयाक्टर स्काभेटर प्रयोग गरी निर्माण कार्य सुरु भएपछि सबैठवाका जनताले काम रोकेपछि बिहान भारतीय प्रहरीको सक्रियत
वर्तमान समस्याको निकासका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अपरिहार्य
आरके पटेल, वीरगंज, १२ जेठ/ शिविरमा रहेका लडाकूको हतियार ए. माओवादीले २४ घण्टाभित्र राज्यलाई बुझाए राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई अहिलेको जटिल परिस्थितिबाट निकास दिन सकिने दलित जनजाति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले बताएका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य बाधक ए.माओवादीको हतियारमोह हो भन्दै शिविरमा भएको हतियार राज्यको जिम्मा लगाई शान्ति प्रक्रियाप्रति ए.माओवादी इमान्दार भएको विश्वास दिलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई निकास दिन सकिने बताए। शान्ति र संविधानको बाधकको रूपमा झलनाथ खनाल सरकार रहेको कारण १२ घण्टाभित्र प्रम खनालले राजीनामा दिई राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउन अध्यक्ष पासवानले आग्रहसमेत गरे। १४ गते संविधान सभाको म्याद नथपिए नेपालको सम्पुर्ण दल असफल हुने हुँदा प्रम खनालको राजीनामा मुलुकका लागि अपरिहार्य भएको दाबी गरे। म्याद थपिएपछि ए. माओवादीको तर्फबाट बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव आएको खण्डमा आगामी निर्वाचन नभएसम्म बाबुराम भट्टराई प्रम हुने राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुन सक्ने र त्यो सरकारले थप समयमा माटो सुहाउँदो
टी–२० क्रिकेट/आयोजक क्लब विजयी
प्रस, कलैया, १२ जेठ/ एलेभन स्टार युवा क्लब शीतलपुरको आयोजनामा खेलकुद विकास समिति बाराको सहयोगमा शीतलपुरमा सञ्चालित टी–ट्वान्टी नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत बिहीवार भएको खेलमा आयोजक क्लब विजयी भएको छ। आयोजक क्लबले हरपुर बलुवालाई २१ रनले पराजित गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको आयोजकले १८ ओभर ४ बलमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ६३ रन बनायो। प्रत्युत्तरमा हरपुर बलुवाले १९ ओभर ५ बलमा सबै विकेट गुमाई १ सय ४२ रनमा समेटियो। प्रतियोगितामा ४१ रन र २ विकेट लिएबापत आयोजक क्लबका अंसारूलहक अंसारी म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। अन्तर माध्यमिक विद्यालय खेलकुद प्रस, रौतहट, १२ जेठ/ अन्तर माध्यमिक विद्यालय स्तरीय राष्ट्रपति रनिङसिल्ड प्रतियोगिता रौतहटमा सम्पन्न भएको छ। जिल्लाको सिमरा भवानीपुर उच्च माविको खेल मैदानमा तीन दिन पहिले सुरु भएको प्रतियोगितामा पुरुष भलिबल, महिला भलिबल, एक विभिन्न स्पर्धाका दौडा तथा ज्याब्लिन थ्रो, हाइजम्पलगायत खेलहरू खेलाइएको थियो। प्रतियोगितामा उच्च मावि सिमरा भवानीपुर ४७ अड्ढका साथ प्रथम, श्री उमावि जङगलसहिया ४५ अड्ढका साथ दोस्रो र जनजागृति
म्याद बढाउनुको औचित्य
–श्रीमन्नारायण सत्ता र शक्तिका लागि केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अनिच्छाका कारण संविधान आउने सम्भावना छैन। जेठ १४ मात्रै आउने भयो, जनताले दिएको दुई वर्षको समयावधि त्यसै खेर फालेर अर्को एक वर्ष पनि सत्ताको लुछाचुँडीमैं बिताउने काम भयो। एमालेका झलनाथ खनाल नेतृत्वको ए. माओवादी सम्मिलित सरकारले एक वर्षका लागि संविधानसभाको म्याद बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। संविधानसभाको म्याद बढाउनुको औचित्य पनि उही पुरानो छ। औचित्यको नवीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। गत वर्ष ए. माओवादीले म्याद बढाउने प्रस्तावको विरोध गरिरहेको थियो अन्त्यमा प्रस्तावको समर्थन गर्‍यो। अहिले ए. माओवादी सरकारमा छ। एक वर्ष अघि संविधान सभाको म्याद बढाइनुको औचित्य नदेख्ने ए. माओवादी अहिले संविधानसभाको म्याद बढाउन उद्यत छ। गत वर्ष ए. माओवादीले खेलेको भूमिका यस वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले खेलिरहेको छ। गत वर्ष ए. माओवादीको समर्थनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम थियो यस वर्ष उपरोक्त दुई दल सरकारको अङग बनेको छ । यसपालि नेपाली काङ्ग्रेसलाई कथित संयुक्त मधेशी मोर्चाले सहयोग र समर्थन गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्ेरसले जेठ १४ गतेको १२ बजे रात्रि
सद्बुद्धि आओस् राजनीतिक दल र सरकारलाई
मनीषा रायमाझी ‘शान्ति प्रक्रिया एवं संविधान निर्माणको काम पाखा लगाएर, तिमी दलहरू घरी सात बुँदे, घरी दस बुँदे, सहमति गर्दै सरकार ढाल्ने र बनाउने गरिराख म चाहिं जेठ १४ पार नगरी बसिराख्छु’– समयले यस्तो अवश्य भन्दैन। घडीको सुईसँगै केही दिन, केही मिनेट, केही पल हुँदै समय बितिरहेको छ। घाम छउन्जेल खेतको आलीमा मस्त सुत्ने अनि अस्ताउने समयमा धान काटेको नाटक गर्नेहरूले बाली भित्र्याउन सक्ने कुरै छैन। दलीय खिचातानीले अहिले देशको अवस्था त्यस्तै भएको छ। सही समय अनि मौकाको सही उपयोग गर्न सकिएन भने त्यसको परिणाम घातक हुन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देशले ठीक यस्तै परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। देशमा अशान्ति, असुरक्षा, महँगी, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, दिनदिनै बढ्दो लोडसेडिङले सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ। यत्रो विकराल परिस्थितिमा पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै छ। कहिले जेठ १४ आउला र आफ्नो चाहनाअनुरूप संविधान लेखिएला भनेर दिन गन्तिमा औंला भाँची बसेको जनता यतिबेला निराश हुन थालिसकेको छ। जनचाहना, जनसरोकारका कुरालाई कम प्राथमिकतामा राखेर ठूला भनिएका, माउमा गनिएका तीन दललगायत अन्य दलहरूको
यो पनि विकल्प हुन सक्छ
ए. नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभा सभासद्हरूले भत्ता नलिने शर्तमा अन्तिमपटकका लागि म्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका छन्। अहिलेको अन्योलपूर्ण अवस्थामा यो एउटा विकल्प हुन सक्छ। किनकि जनताको बढी आक्रोश भत्ता सुविधा लिएर पनि सभासद्हरूले तोकिएको म्यादभित्र संविधान लेखन गरेनन् भन्ने हो। सबैथरीका सभासद्हरूका कुरा सुन्दा पनि संविधान लेखन कार्य झन्डै पूरा भइसकेको, केही विवादित मुद्दामा सहमति हुन नसकेको भन्ने छ। यस अवस्थामा सबैका कुराहरू समेटिनेगरी संविधानको खाका तयार गरेर, पछि सुधार एवं संशोधन गर्न नसकिने होइन। सङ्घीयतामा जाँदा अधिकार प्रयोजनका विश्वमान्य सिद्धान्तहरू छन् जसको अनुसरण गर्न सकिन्छ र प्रदेशगत संरचनाका लागि अहिले थोरै प्रदेश बनाएर पछि आवश्यकता परेमा थप गर्न नसकिने होइन। भारतमा संविधान लागूभएदेखि अहिलेसम्म कैयौंपटक प्रदेशको विभाजन भइसकेको छ। त्यसैगरी लडाकू संयोजनका विषयमा पनि सङ्ख्यामा मतभेद नगरी जति हुन सक्छ बढीको व्यवस्थापन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुको कुनै तुक देखिंदैन। उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन् र सरकारको कर्तव्य हो आफ्नो नागरिक कोही बेरोजगारी नरहून् भन्ने। ह
संविधानसभाको म्याद नथपे मुलुक दुर्घटनामा पर्ने– तीन दलका नेताहरू
प्रस, वीरगंज, ११ जेठ/ संविधानसभाको म्याद थप्न नसके मुलुक ठूलो दुर्घटनामा फस्ने मुख्य तीन राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएका छन्। संविधानसभा अन्योलमा छैन अन्योलमा पार्ने प्रयास भइरहेको छ– नेताहरूको कथन थियो। पर्सा एफ.एम. प्रा.लि. तथा रेडियो वीरगंज ९९ मेघाहर्ज, वीरगंज म्युजिकल एफ.एम.द्वारा स्टुडियो परिसरमा आज आयोजित ‘अन्योलमा रहेको संविधानसभा र यसको निकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रमका सहभागी नेताहरूले सो कुरा बताएका छन्। कार्यक्रमका ए. माओवादी भोजपुरा राज्य समितिकी सेक्रेटरी अन्जना विशंखेले परिवर्तनकारी र राष्ट्रियताका पक्षधर शक्तिलाई जबरजस्ती पछाडि धकेल्ने कार्य भइरहेको भन्दै स्वाधीन राज्य र संविधान निर्माणको मुद्दा एउटै भएको बताइन् । “संविधानसभाको म्याद थप्नुको विकल्प छैन तर त्यसभन्दा पहिले दलहरूबीच असहमतिका बुँदा, तिनको समाधानका उपायहरू लिपिबद्ध गरेर मात्र संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्छ। त्यसभन्दा पहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले जनतासँग सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ”– सेक्रेटरी विशंखेको कथन थियो। आफूहरूले नयाँ जनवादी क्रान्तिको ढाँचामा संविधान बनाउन नखोजेको
ख्याल–ख्यालमैं एकजनाको मृत्यु
आरके पटेल, वीरगंज, ११ जेठ/ छपकैयामा आज अपराह्न ख्याल–ख्यालमा एक युवकको मृत्यु भएको छ। स्थानीय लालु महतो कोइरी र मुकेशकुमार पटहेराबीच खेलखेलमा सामान्य विवाद भएपछि उत्पन्न झगडामा महतोले पटहेरालाई मुक्का प्रहार गर्दा उनको मृत्यु भएको हो। बुधवार अपराह्न घर नजिकै रहेको मैदानमा पटहेरा र कोइरी क्रिकेट खेल्दै थिए। दुवैबीच ख्याल–ख्यालमैं कोइरीले प्रहार गरेको मुक्का लागी पटेरा मुच्र्छित भए। उपचारका लागि वीरगंज नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमैं मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले जनाएको छ। पटहेराको शव परीक्षणका लागि अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। मुडकी प्रहार गर्ने कोइरी फरार छ भने उसकी आमा परमा देवी, बुवा हरिराम महतो कोइरी र भाइ रामबाबु कोइरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब निरीक्षकसुरेन्द्र यादवले बताए।
बाराको वन क्षेत्र, टाँगियाबस्तीमा दिनदहाडै काठ तस्करी
प्रस, निजगढ, ११ जेठ/ बाराको डुमरवाना टाँगियाबस्ती लगायत वरपरका वन क्षेत्रमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने कुराले चर्चा पाउँदै गर्दा बाराको वन क्षेत्रमा व्यापक हरियो रूख चोरी तस्करी बढेको छ। वन कर्मचारीको संरक्षणमा वन क्षेत्रभित्र तस्कर समूहले दिनदहाडै रूख ढाल्ने गरेका छन्। चोरी तस्करी गरी ल्याइएका हरियो गोलाइ खुलेयाम घर आँगनमा चिरान गर्दै ट्रक, टायरगाडामा राखी समिल र अन्यत्र बिक्री हुने गरेको छ। जिल्ला वन कार्यालय, बाराको मातहतमा रहेका तामागढी, मधुवन नयाँ बस्ती, डकाहा रेन्जपोस्ट, पसाहा रेन्जपोस्ट, हलखोरिया वन रेन्जपोस्ट, इलाका वन कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीको संलग्नतामा हरियो गोलाइ तथा चिरान काठ तस्करी हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ। तामागढी इलाका वन कार्यालय, कोल्भी र मधुवन नयाँ बस्तीको वन क्षेत्रको हरियो ठाडो सालको रूख चोरी तस्करी गरी पेशेवर काठ तस्करहरूको समूहले चिरान गर्दै बिक्री गर्ने गरेपनि वन कार्यालयका कर्मचारी बेखबर बनेका छन्। तस्करहरूले काटेका रूखहरू गस्तीमा रहेका केही सचेत कर्मचारीहरूले नियन्त्रणमा लिएपनि झिसमिसेमैं रूखका ठुटा र गोलाइमा चिह्न लगाउँदै वफादार बन्न
एमबिबिएसप्रति आकर्षण र केही वास्तविकता
सञ्जय साह ‘मित्र’ भर्खर–भर्खर विद्यालय जान लागेका बालबालिकालाई सोध्ने हो–‘बाबु, पढेलेखेर भविष्यमा के बन्ने ?’ सोझो जवाफ आउँछ ‘डाक्टर’। यदि कुनै कक्षामा पसेर यो प्रश्न गर्ने हो भने लगभग सबै विद्यार्थीले यही रेडिमेड जवाफ फर्काउँछन् तर नेपालमा डाक्टरको कमी अद्यापि छँदैछ। मनभित्र डाक्टर बन्ने आकर्षण राख्ने तर त्यसका निम्ति परिश्रम गर्दै नगर्ने प्रवृत्तिले बालबालिका आफ्नो सपनालाई मूर्तरूप दिन सकिरहेका हुँदैनन्। हो, डाक्टर पेशामा आकर्षण छ। सबैतिर हलो– हाई र उच्च सम्मान छ। पेशामा पैसै–पैसा हुन्छ। फुर्सद नामको चीज हुन्न। जुन घर–परिवारमा डाक्टर हुन्छ, त्यो घर–परिवारको सामाजिक हैसियत र मर्यादा नै बढ्छ। त्यस परिवारसँग सम्बन्ध राख्ने नातागोता, इष्टमित्रहरू पनि नाक फुलाउन थाल्छन्। सधैं ठूलाहरूसँगको उठ–बस, सम्पर्कले गर्दा डाक्टर सधैंभरि व्यस्त नै हुन्छ। त्यसमा चारैतिर उनको माग हुन्छ। डाक्टर उपाधि हासिल गरेपछि आर्थिक हैसियतमा पनि निरन्तर वृद्धि हुन्छ, भइरहन्छ र डाक्टरका लागि ऐश–आरामका चीजको कमी हुँदैन। खोजेको बेला, रोजेको सामग्री र साधन डाक्टरका निम्ति डाक्टरको अगाडि हाजिर हुन्छ। अन्य
उदाहरण बनाएको हो त ?
संविधानको माग गर्दै नेकपा माओवादी (मातृका समूह) ले मङगलवार गरेको नेपाल बन्दको क्रममा यस क्षेत्रमा कहीं पनि टायर बालिएन। यद्यपि बन्द त्यति सफल थिएन, तर बन्द गर्नका लागि बल प्रयोग भएको पनि देखिएन। सूचनाको भरमा बन्द अपेक्षाकृत सफल भएको कुरालाई सो पार्टीले बन्दलाई सकभर जनतालाई सास्ती नदिने खालको बनाएकोले हुन सक्दछ। साना सवारी साधनहरू चलिरहेका थिए। हुनत विद्यालय–कलेजहरू बन्द रहे। विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा व्यवधान पर्‍यो। गरिखानेहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको यातायात क्षेत्र बन्द हुँदा निमुखा, सर्वहाराले सास्ती पाए। यात्रामा निस्किसकेका मानिसले हण्डर खाए। बन्दलाई जतिसुकै शालीन र शान्त बनाउन खोजेपनि अन्यत्र मोटरसाइकलहरू जलाइएका, वीरगंज क्षेत्रमा ट्रकहरूमा पेट्रोल बम विस्फोटन गराइएका घटनाहरू देखा परे। भोग्नेका लागि सानो पीडा पनि असहय हुन्छ। यात्रामा निस्केका व्यक्तिका लागि समय र पैसाको अतीव महत्त्व हुन्छ। पैसाको त तत्विशेष, समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा कति अपरिहार्य कर्तव्य पालनबाट वञ्चित हुनुपर्छ, त्यस कुराको बोध भुक्तभोगीलाई मात्र हुन्छ। बन्द कदापि उचित होइन, यदि सकारात्मक समाज परिव
शान्ति, सहमति र संविधानका लागि जनदबाब
प्रस, वीरगंज १० जेठ/ शाान्ति सहमति संविधान माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साको अगुवाइमा आज वीरगंजमा बृहत र्‍याली तथा हस्ताक्षर अभियान सम्पन्न भयो। नेपाल पत्रकार महासङ्घको सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार अभियानको पहिलो दिन आज ‘जनतासँग गरेको वाचा पूरा गर’ मुख्य नारासहित जुलुस प्रदर्शन गरिएको थियो। जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ/संस्था, व्यावसायिक एवं व्यापारिक क्षेत्र, बार एशोसिएशन, पेशागत सञ्जाल, अधिकारवादी सङ्घसंस्था, सञ्चार क्षेत्र एवं सञ्चारकर्मीहरूसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ/संस्था, नागरिक समाज का अगुवा पदाधिकारी, प्रतिनिधिीहरूको सहभागिता रहेको उक्त र्‍याली घण्टाघर चोकबाट सुरु भएर नगरको विभिन्न क्षेत्र परिक्रमा गर्दै पुन: घण्टाघर चोकमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै सहभागी वक्ताहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूको कुर्सी मोहका कारण शान्ति संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताएका छन्। जन दबाबलाई सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरे आन्दोलनको आँधी बेहेरी सृजना हुन सक्ने, जनताले निकम्माहरूलाई पाखा लगाएर न
पुनर्गठित माओवादीको बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित तीनवटा ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार, क्षति भएन
प्रस, वीरगंज, १० जेठ/ पुनर्गठित नेकपा माओवादीले आह्वान गरेको एक दिने आम हडतालको कारण आज वीरगंज तथा सो आसपासका क्षेत्रहरू प्रभावित रहे। मुख्य बजार क्षेत्र दिनभरि ठप्प रहयो। शैक्षिक संस्था, व्यपारिक प्रतिष्ठान, उद्योग–कलकारखाना बन्द रहेका थिए। लामो तथा छोटो दूरीका सवारी यात्रुवाहक सवारी चलेनन्। मोटरसाइकल, ट्याम्पो र टाँगाहरू निर्वाध चलेका थिए। खाजानास्ताको पसल, सैलुन, पान पसल र औषधि पसलहरू प्राय: सञ्चालनमा थिए भने नगरका भित्री भागमा पसलहरू फाटफुट खुलेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले बन्दको पूर्व सन्ध्यामा गरेको मसाल जुलुसबाहेक वीरगंज नगरको कुनै पनि स्थानमा टायर जलाएनन्। नाराबाजी तथा प्रदर्शन गर्ने कार्य कतै देखिएन। पार्टी कार्यकर्ताहरूले बन्दको अवज्ञा गर्नेलाई छापामारी शैलीमा कारबाई गर्ने तयारी गरेको कुरा बजारमा फैलिएपछि नगरको जनजीवन आतङिकत बनेको थियो। बन्दको क्रममा पुनर्गठित माओवादी कार्यकर्ताहरूले छुट्टा–छुट्टै स्थानमा तीनवटा खाली ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार गरेका थिए। बिहान करिब ११ बजे गण्डकबाट बसपार्कतर्फ आउँदै गरेको नम्बर नखुलेको १० चक्के भारतीय ट्रकलाई लछमनवा चोक
टी–२० क्रिकेटमा तेलकुवा विजयी
प्रस, कलैया, १० जेठ/ एलेभन स्टार युवा क्लब शीतलपुरको आयोजनामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति बाराको सहयोगमा शीतलपुरमा ट्वान्टी–ट्वान्टी नकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। मङगलवार भएको पहिलो खेलमा तेलकुवा क्रिकेट क्लब विजयी भएको छ। तेलकुवाले रामपुर क्रिकेट क्लब लाई ५४ रनले पराजित गरी विजयी भएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङमा ओर्लेको तेलकुवाले १९ ओभर दुई बलमा सबै विकेट गुमाएर १ सय ६६ रन बनायो। प्रत्युत्तरमा रामपुर १३ ओभरमा सबै विकेट गुमाई १ सय १२ रनमैं समेटियो। प्रतियोगितामा २२ रन र ४ विकेट लिएबापत तेलकुवाका नरेश यादव म्यान अफ दि म्याच घोषित भए। यसअघि प्रतियोगिताको उद्घाटन एक समारोहबीच जिखेविस बाराका अध्यक्ष मक्ति यादवले गरे। इम्तियाज अंसारीको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रमको सञ्चालन भोला कुशवाहाले गरेका थिए।
जेठ १४ अगाडि र पछाडि
विनोद गुप्ता २०४६ सालको राजाद्वारा जारी संविधान स्वीकार गरिबसेका माओवादीहरू १० वर्षको सशस्त्र सङ्घर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा १२ बुँदे समझदारी गर्दासम्म उनीहरूको मुख्य माग नै संविधानसभा थियो। संविधानसभा चुनाव भयो र ६०१ सदस्य भएको संविधानसभा दुई वर्षको लागि गठन भयो। तर निर्धारित समयमा यसले संविधान दिन सकेन। त्यस बेला माधव नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादी र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार थियो र प्रचण्डजीले संविधानसभाको म्याद लम्ब्याउन षड्यन्त्र भइरहेको भनाइ सार्नुभएको हामीलाई सम्झना हुनुपर्छ। अहिले पनि संविधानसभाकै म्याद थप गर्नुपर्नेछ, सरकार भने माओवादी र विभाजित एमालेको छ र उहाँ नै भन्नु थाल्नुभएको छ– संविधानसभा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र हुन थालेको छ। ६०१ सदस्य भएको संविधानसभामा २२० जना माओवादी नै छन् त्यसमा एमालेको १०० जोड्दा ३२० जति हुन आउँछ। त्यो हिसाबले संविधान लेख्ने मुख्य जिम्मेवारी माओवादीकै होइन र ? हो भने पहिलोपटक म्याद थप्दा षड्यन्त्र हुने र दोस्रोपटक नथप्दा षड्यन्त्र हुने दोहोरो मापदण्ड एउटै कार्यको लागि कसरी हुन सक्छ ? यस घटनाक्रमबाट के चरितार्थ हुन्छ भने माओवादीहरूले अझसम्
फुटले कसलाई बिगार्छ
बहुदलीय व्यवस्थाको अर्थ हो, विभिन्न विचारधारा भएका व्यक्ति, सङगठन तथा राजनीतिक दलहरूको मिलोमतोले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना। लोक कल्याणकारी भन्ने बित्तिकै समग्र जनताको हित बोध हुन्छ – त्यो सरकार जसले मात्र जनहितबारे सोच्दछ। किनकि मानिस आफैंमा पूर्ण हुँदैन तसर्थ बहुजन मिलेर जुन निष्कर्ष प्राप्त गर्दछ, त्यो नै सर्वोत्कृष्ट राज्य हुन्छ। हिजोका दिनमा यहाँ परिवारले राज्य सञ्चालन गर्‍यो, आफ्नो सुविधालाई मात्र हेर्‍यो। राजसंस्थाले शासन गर्‍यो प्रजालाई त्रस्त बनाएर आफ्नो हित साधना गर्‍यो। पछिल्लो समयमा प्रजातन्त्र आयो, जनताको हितको विचार गर्दा व्यक्ति र दलको स्वार्थ पूर्ति खलबलिने अवस्था देखियो। अनि चालबाज नेताहरूले जनसमूहको खण्डीकरण गरे र आ–आफ्नो जन–भाग छुटयाए। यसै मेसोमा उनीहरू आफू खण्डीकृत हुँदै गए। किनकि जनसमूहको नाममा केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिमा अप्ठेरो पर्ने देखियो। उनीहरूले आफ्नो–आफ्नो पक्षको जनता लिएर छुट्टै सङगठन र दल बनाए। परिणति– उनको जहिले पनि खुदो, जनता भने परिवारवाद, जन्मवादको शासन शैलीभन्दा बढी पिल्सिंदै गयो। परिवारवादी र जन्मवादी शासन शैलीमा जनताको स्वर एउटै हुन्थ्यो।